မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Phuket, Thailand Dream - ( ခရီးစဉ် Day 1)
နှိပ်စက်ထားပါ။ နှိပ်စက်ထားပါ။ အစားအသောက် ပုံတွေနဲ့။ BTW, I like all photos. U looks great !! Thanks for sharing your experience.
အစားအစာထဲမှာ ယိုးဒယားစာ အကြိုက်ဆုံးပါပဲး)
ကမ်းခြေမှာ ထိုင်ငေးနေတဲ့ ပုံလေးလှတယ်။
ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ ကမ်းခြေလိုက်ဖက်ပါတယ်း)
မမဗေဒါအရမ်းလှတာဘဲ... မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ချစ်စရာလေး.. မိသားစု စုံညီပုံတွေ့ရတော့ စိတ်ချမ်းသာ လိုက်တာ... ကူးက တော့ မိသားစု မဆုံရ သေးဘူး။
အဲမှာ အစားသောက်အရမ်း ဈေးချိုတယ်.. စားချင်တာ လဲအကုန်ရတယ်.. ဘန်ကောက် ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးဘဲ..း))
မဗေဒါရေ အခုလို ပုံတွေနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံ၂ ရေးထားပေးလို့ကျေးဇူး
ကမ်းခြေမှာရိုက်ထားတဲပုံလေးက လှ မှ လှ
ကမ်းခြေကို ကြည့်ပြီးတော့ သဘောကျ...
အစားတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သွားရည်ကျ...
မဗေဒါကို ကြည့်လိုက်တော့ လှမှလှ...
Pario ပတ်ထားတဲ့ပုံလေးမှာ မဗေဒါတော်တော်လှတယ်။ စားစရာတွေကတော့ စားချင်စရာချည်းပဲ။ မိသားစုလိုက်တူတူခရီးသွားရတာ ပျော်စရာကြီးနော်။ အားကျသွားတယ်။
ဆက်ရေးပါ မြန်မြန်ရေးပါ ကြားဖြတ် ကိုရီးယားတွေ မဝင်နဲ့ဦး
ကွန်မန့်ပေးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စာဖတ်သူတွေ ဘလော့ဂါတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်... ခု နောက်ရက်ကို ဆက်ရေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်... ခုလို အားပေးစကားတွေ ပြောသွားကြတော့ နောက်ဆက်ရေးဖို့ အားရှိတာပေါ့...